XOG+SAWIRRO: DF Soomaaliya oo burburisay Saldhigii ugu weynaa Al- Shabaab ku lahaayeen duleedka Muqdisho | Puntlandi.ca
Home Somaliya XOG+SAWIRRO: DF Soomaaliya oo burburisay Saldhigii ugu weynaa Al- Shabaab ku lahaayeen duleedka Muqdisho
XOG+SAWIRRO: DF Soomaaliya oo burburisay Saldhigii ugu weynaa Al- Shabaab ku lahaayeen duleedka Muqdisho
Dawladda Faderaalka ee Soomaaliya ayaa daaha ka rogtay in ay burburisay Saldhigii ugu weynaa ee Al- Shabaab ay ku lahayeen gobalka Sh/Hoose oo la deris la ah caasumada Soomaaliya ee Muqdisho, kaas oo inta badan laga diyaarin jiray howlgalada ay kooxdaas qaado.
Ciidamada Kumaandooska dawladda Faderaalka ee DANAB G/sare Axmed Cabdullaahi Sheekh ayaa sheegay in ay ku dileen howlgal gaar ah oo ay qaadeen in ka badan 10 dagaalame oo katirsan Al- Shabaab, isla markasna ay ku gubeen Saldhigan.
Taliyaha ciidamadaas ayaa u sheegay warbaahinta dawladdu maamusho in uu howlgalkan ahaa mid qorsheysan oo laga gaaray yoolkii laga lahaa, wuxuuna sheegay in ay hayaan xogo badan.
Sawirro ay warbaahintu baahsay waxaa ka muuqanaya Saldhigan oo ay sawirro ka qaadayaan ciidamada dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, sidaas oo kalena waxaa la xaqiijiyey in la gubay Agabyadii yaalay qaarna lasoo qaaday.
Saldhigan ay dawladdu sheegtay in ay burburisay ayaa ahaa halka lagu tuhunsan yahay in laga soo abaabulay weerarada qaraxyada ah ee inta badan laga fuliyo gudaha magaalada Muqdisho, waxaana talaabada laga qaaday ay tahay mid muujinaysa talaabo horumar leh.